नेपाल प्रहरीमा नयाँ आईजीपीका के छन् चुनौती ? – Padhnekura
काठमाडौं : प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) शैलेश थापा क्षेत्री प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)मा बढुवा भएका छन्। वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका क्षेत्रीलाई गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
आईजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले बुधबार अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन्। २८औं आईजीपीको ‘दौड’मा अर्का एआईजी हरिबहादुर पाल पनि थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वरीयता नमिची यसअघिको नियुक्तिलाई निरन्तरता दिँदै क्षेत्रीलाई आईजीपी बनाउने निर्णयमा पुगेका थिए।
यसपटक आईजीपी नियुक्तिमा विगतजस्ता विवाद र हानथाप थिएन। क्षेत्री र पाल दुवै जना २०४९ वैशाख १९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका हुन्। दुईमध्ये जो नेतृत्वमा पुगे पनि मिलेर काम गर्ने समझदारी उनीहरूबीच देखिएको थियो।
क्षेत्रीले डीआईजी हुँदा प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता, महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको नेतृत्व गरेका थिए। एआईजी भएपछि उनी मानव स्रोतसाधन र प्रशासन विभागको नेतृत्वमा थिए। उनले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जिल्ला प्रहरी सल्यानको प्रमुख भएर काम गरेका थिए। त्यसपछि क्रमशः सिन्धुपाल्चोक, कास्की, धादिङ र झापामा प्रहरी प्रमुख भए।
भक्तपुर कटुन्जेमा २०२५ मंसिर २३ गते जन्मिएका क्षेत्री २०४९ वैशाख १९ गते प्रहरी निरीक्षक भएर सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि प्रहरीकै छ। उनका बुवा शम्भु थापा प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट अवकाश प्राप्त हुन्।
राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर क्षेत्री २०५८ फागुन १० गते प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी नायब उपरीक्षकमा बढुवा भए। २०६७ पुस २० गते एसपी, २०७४ साउन ११ गते एसएसपी, २०७५ असोज २८ गते डीआईजी र २०७६ चैत ९ गते एआईजीमा बढुवा भएका थिए।
संगठनमा उनी इमानदार र व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन्। लामो समय प्रहरी महानिरीक्षककै सचिवालयमा रहेर काम गरेका क्षेत्रीलाई प्रहरी नेतृत्व र उसका जिम्मेवारीका विषयमा राम्रै ज्ञान छ।
नेतृत्वमा पुग्न नेताको घरदैलो चहार्नु पर्दैन भन्ने भनाइ यसपटक क्षेत्रीको हकमा लागू भयो। राजनीतिक सम्बन्धबाट टाढै रहेका र प्रहरी संगठनको भविष्य राजनीतिसँगै जोडिएकाले उनले प्रहरीको वृत्ति विकासलाई कसरी माथि उठाउँछन् ? यो चुनौतीपूर्ण छ। प्रायः सरकारले प्रहरी नेतृत्वले आफ्नो निर्देशनलाई अक्षरशः पालना गरोस् भन्ने इच्छा राख्छ। गलत निर्देशनको विरोधी क्षेत्रीले अब आफूलाई कसरी सिद्ध राख्छन्, त्यो अर्को मुख्य चुनौती छ।
संघीय र प्रदेश प्रहरी संरचना जनशक्ति व्यवस्थापन क्षेत्रीका लागि अर्को चुनौतीपूर्ण काम छ। सरुवाबढुवा भनसुनकै आधारमा चल्छ भन्ने प्रहरी संगठनका अधिकांश कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न पनि उनलाई चुनौती छ।
कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको तथ्य अझै खुलेको छैन। दोषी पक्राउ त के किटानसमेत भएको छैन। यो पत्ता लगाउनु पनि उनका लागि चुनौतीपूर्ण काम हो। Source: Annapurna Post
यस्ता छन् होम आइसोलसनमा बस्ने संक्रमितले पालना…
Previous आर्थिक वर्ष २०७७ /७८ को बजेट
Next लकडाउन खुकुलो पार्दा राजधानी उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्यो : प्रधानमन्त्री